Kumaa noqon doono kabtanka afaraad ee kooxda Real Madrid kadib bixitaanka Cristiano Ronaldo? – Gool FM
Kumaa noqon doono kabtanka afaraad ee kooxda Real Madrid kadib bixitaanka Cristiano Ronaldo?
(Real Madrid) 12 Luulyo 2018. Daafaca Faransiiska ah Raphael Varane ayaa la filayaa inuu noqdo kabtanka afaraad ee Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda, si uu u noqdo badalka Cristiano Ronaldo, kadib markii uu ku biiray kooxda Juventus.
Sergio Ramos oo yimid kooxda Real Madrid sanadii 2005 ayaa ah kabtanka koowaad ee kooxda Los Blancos.
Laacibka reer Brazil ee Marcelo ayaa ah kabtanka labaad ee kooxda Real Madrid kaasoo insna kooxda yimid sanadii 2007, halka kabtanka saddexaad uu noqonayo Benzema oo ay Real Madrid saxiixiisa sameesay sanadii 2009.
Sidaas darteed Raphael Varane ayaa la filayaa in laga bilaawo xili ciyaareedka soo aadan uu noqdo kabtanka afaraad ee Real Madrid.
Laacibka reer France ayaa yimid garoonka Santiago Bernabéu sanadii 2011, wuxuuna xili ciyaareedka soo aadan u noqon doonaa kiisii siddeedaan ee kooxda Real Madrid. Wuxuuna ilaa iyo haatan u ciyaaray 233 kulan ee ah dhamaan tartamada kala duwan, wuxuuna dhaliyay 10 gool.
“In aan gaarno finaalka koobka aduunka waa mucjisada kubada cagta”… Mario Mandžukić
Kabtanka xulka qaranka England Harry Kane oo fariin u diray shacabka reer England